Rovio wuxuu bilaabay hawlgal shimbiraha xanaaqsan! gobol ahaan | Androidsis
Rovio qalad ku soco qaladka shimbirahaaga waalan kuwaas oo leh doorbid aad u weyn oo ku saabsan dhammaan noocyada dhismayaasha si ay u dumiyaan iyagoo leh madaxyadooda waaweyn. Xayeysiis si fiican u shaqeynaya, in kasta oo mararka qaar ay u muuqato in ay layaab ku tahay sharadyadan kaladuwan in ay bilaabayaan marar badan, sidii ay ahayd shimbiraha ugu dambeeya ee xanaaqa 2.
Hadda waxay heystaan ​​ciyaar fiidiyow ah oo cusub oo loo yaqaan 'Angry Birds Action' taasna way kaga duwan tahay cinwaannada kale maxaa yeelay asal ahaan waxaan ku hor joognaa kubbadda pinball laakiin jilayaasha aan jecel nahay ee u adeegaya sidii kubbadaha. Red, Chuck, Bomb iyo Terence waxay u isticmaali doonaan madaxooda halkan si ay noo siiyaan dhamaan dhibcaha cinwaankan cusub ee Rovio.
In kasta oo aan wajaheyno ciyaar fiidiyow ah oo loo yaqaan 'pinball video game', waxaa jira gadaal yar oo gadaal laga gelinayo si loo siiyo hay'ad dheeri ah ciyaartan cusub ee Rovio video game Casaan ayaa soo toosa kadib habeen xaflad loo sameeyay ogaada in tuuladiina la burburiyay. Qaybta ugu liidata waa isaga oo lagu eedeeyay burburin, markaa Casaanku waa inuu caddeeyaa inuusan dhab ahaantii ahayn dambiilaha.
Farqiga weyn ee udhaxeeya ciyaartan iyo kubbadaha kale ee pinball-ka ayaa ah in, halkii aad shimbiraha ka soo tuuri lahayd xagga hoose, waxaad ka sameyn doontaa xagga sare. 90 heer ayaa ku sugaya inaad hesho shay kasta oo aad u baahan tahay si aad uga gudubto adigoon waqti badan kaaga lumin.
Waa muhiim inaad furto dhismayaasha sida aad ugu ciyaareyso awood u yeesho inuu dayactiro magaalada burbursan. Ciyaar fiidiyoow ah oo ka xor ah Bakhaarka Play-ka oo leh nooca freemium-ka oo leh micropayments-ka soo socda. Waqtigan la joogo waxaa lagu bilaabay gobol ahaan, markaa waa inaad sugto xoogaa haddii aadan ka helin waddankaaga. Haddii aad hesho APK ma awoodi doontid inaad ciyaartid maaddaama aad u baahan tahay inaad soo dejiso megabytes, taas oo farriin u muuqaneyso inay ka digeyso inaadan iibsan.
Waa arrin xoogaa sug si ay qof walba ugu tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Shimbiraha cadhooday » Shimbiraha Xanaaqsan Fal! waxaa laga heli karaa hadda Android-ka xulashada gobollada
Laba sawir oo cusub oo Meizu Pro 6 ah oo daadanaya